FreeBSD မေးမြန်းရန် - MYSTERY ZILLION
November 2011 edited November 2011 in Linux/Unix
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ - ၄ နှစ်ကနဲ့ အခုအခါ တော်တော်လေးပြောင်းလဲလာတယ် အများကြီးပဲ
ကျနော်လဲ အရင်က Linux ကို တော်တော်သုံးခဲ့တယ် နောက်တော့ FreeBSD သုံးခဲ့တယ်။ အခုလဲ သုံးနေဆဲပါ။ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် နှေးတော့လုပ်ရကိုင်ရတာသိပ်မကောင်းဘူး။ FreeBSD နဲ့ ပတ်သတ်တာ မသိရင် မေးပါ။ Handbook ကြည့်ပြီး မြန်မာလို ဖြေပေးမယ်
Linux or Unix ဘယ်ဟာသုံးမလဲ စဉ်းစားရင်အတော် ပြောရခက်တယ် ဘာကွာလဲမေးရင် Technical Details ကတော့ကွာတယ် ဒါပေမယ့် မြင်သာလောက်တဲ့ ကွာခြားမှု့ပြပါဆိုရင် အတော်ပြရခက်တယ် သာမန်သုံးတဲ့လူအတွက်က မကွာခြားဘူးဖြစ်နေတယ် UI ပါလာရင်လည်း ဟိုဘက်လည်း Gnome ရှိတယ် KDE ရှိတယ် ဒီဘက်လည်းအတူတူပဲ အဲဒီတော့ Application တွေကလည်း အတူတူပဲပြောလို့ရတယ်။ Shell တွေကြည့်ပြန်တော့လည်း Linux or Unix ဘယ်ဟာသုံးသုံး Shell လည်းတူတယ်။
Commercial Unix တွေကတော့ သူတို့က ထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့ Dedicated Hardware တွေအပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်အောင် ထုတ်ထားတော့ အဲဒီ့ဟာတွေကတော့ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ ငြင်းစရာမရှိဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် Open Source Unix တွေကတော့ General ပဲဆိုတော့သိပ် မကွာလောက်ဘူးထင်တာပဲ။ အဲဒီတော့ ဘာကြောင့် FreeBSD ကိုသုံးဖြစ်သလဲဆိုတဲ့ ကိုသေတ္တာရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြပါဦးဗျ။
ဟုတ်တယ် .. သာမာန်အားဖြစ်ကြည့်ရင် အတူတူလိုပဲ။
Linux ကတော့ Just Kernel ပါ သူ့ကိုသုံးဖို့ user land ကလိုလာပြီ Debian userland နဲ့ သွားမလား Fedora userland နဲ့သွားမလား ဒါမှမဟုတ် Ubuntu နဲ့သွားမလား Linux မှာ base ဆိုတာလည်း userland ရဲ့ base ပဲ၊ ဆိုလိုတာက Linux မှာ kernal နဲ့ base အတူတူမရှိဘူး။ FreeBSD မှာ kernel ရော base ရော user land ရော တနေရာထဲမှာ အတူတကွ Development ဖြစ်ပြီး advanced operating system ဖြစ်တယ် unique ဖြစ်တယ်။ system configuration တွေဟာလဲ text files တွေအနေနဲ့ချည်းပဲ နောက်ပြီး သူတို့ကတနေရာတည်းနဲ့ တစ်စုတစ်စည်းရှိတယ်။ system က အရမ်း stable ဖြစ်ပြီး security ပိုင်းမှာလည်း ပိုလို့ advanced ဖြစ်တယ်။ FreeBSD မှာ port/pkg system က Linux မှာထက် ပိုပြီး clean ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး Documents ကောင်းကောင်းလုပ်ထားတယ်။
နောက်ပြီး codec တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Linux တွေလို့ non-free အနေနဲ့ မဟုတ်ဘူး၊ FreeBSD ကို Install ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့် sound card ကို configure လုပ်ပြီးတာနဲ့ player တခုခုနဲ့ သီချင်းတွေရော ဗွီဒီယို files တွေရော နားထောင်လို့ ကြည့်လို့ရပြီ ။ ubuntu မှာ ဆို ubuntu-restricted-extras ဆိုတာကို ထပ်သွင်းရပါသေးတယ်။
နောက်ပြီး FreeBSD မှာ Desktop Environments က Optional ပါ။ ကိုလူပျိုကြီး အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို KDE, Gnome နဲ့လဲရတယ် ကျန်တဲ့ Xfce တို့ Fvwm တို့ OpenBox တို့ .. etc .. တွေ အများကြီးနဲ့လဲ သုံးလို့ရပါတယ် .. အားလုံးကိုသွင်းထားပြီး လိုချင်တဲ့ Destkop ကို သုံးလို့ရပါတယ်၊ ဥပမာ
Gnome ရယ် Xfce ရယ် fvwm ရယ် သွင်းထားတယ်ဆိုရင် ကြိုက်တဲ့ ဟာကို လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ယူသုံးလို့ ရပါသေးတယ်။ သာချက်တွေကတော့ အများကြီးပါ ကျနော် မစမ်းကြည့်ရသေးတဲ့ modern features တွေလဲ အများကြီးပါ .. ဥပမာ zfs system တို့လိုပေါ့ .. ကျနော် အများကြီးလေ့လာဖို့ ကျန်ပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက Limitations တွေများနေတယ်။
နောက်ပြီး Linux compatible Layer ရှိတဲ့အတွက် Linux applications နဲ့ games တွေလဲ ကစားလို့ရပါတယ်။ ကျနော် xgalaga air space game ငယ်လေးကို FreeBSD နဲ့ Debian မှာ ကစားကြည့်တယ် FreeBSD မှာ ညိမ်နေတာပဲ solid ပဲကစားရတာ၊ Debian မှာ nvidia driver install လုပ်ထားပြီးတာတောင် အဆင်မပြေဘူး၊ စသည်ဖြစ်ပေါ့။
ကျနော် FreeBSD ကိုကြိုက်တဲ့အချက်တွေထဲမှာ အဓိကအချက်ကတော့ တကယ့်ကို ရိုးရှင်း ပြီး လုပ်ရကိုင်ရလွယ်ကူလို့ရယ် unique ဖြစ်ပြီး well documented ဖြစ်လို့ပါ။
FreeBSD မှာ Default shell က sh ပါ၊ bash ကိုသုံးလဲရပါတယ်။ root အတွက် csh shell က default .. ကြိုက်တဲ့ shell ပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်။ Bash script ကို sh နဲ့လဲ run လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် specific ပြီး complicated script တွေအတွက် သူ့ shell နဲ့သူ run တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
အင်းဗျ ပြောထားတာ သဘောကျတယ် ဟုတ်တယ် Linux ရဲ့ပြသနာက ဘယ်ဟာကို Linux ခေါ်သလဲလိုက်ရှာရင် Kernel ပဲပြလို့ရတယ် ကျန်တာက Application တွေစုထားတာလို့ပဲ ပြောရမှာပဲ အဲဒါကြောင့် တစ်ချို့ Application တွေက ဟိုတစ်ခုမှာရ ဒီဘက်တစ်ခု ပြသနာတက်နဲ့ဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်။ FreeBSD ကတော့ Kernel ရော Application တွေရောတစ်နေရာတည်းက ဖြစ်တဲ့အတွက် Stability ကစိတ်ချရတယ် တစ်ခုတည်းအတွက် ဖြစ်နေတော့ အဲဒီ့တစ်ခုအပေါ်မှာလည်း အသေအချာ Port လုပ်ထားတဲ့အတွက် ပြသနာအတော်နည်းပါတယ်။
နောက်ဆုံး Update လိုချင်ရင် FreeBSD မှာကိုယ်တိုင် Build လုပ်ရင်ရတယ် ဒါပေမယ့် Port ထဲကဟာကိုသာ Build လုပ်ပြသနာဖြစ်တာ လုံးလုံးမရှိသလောက်ပဲ Build လုပ်လို့ကြာတာသာရှိတယ် ထွက်တော့ထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့သမျှကတော့ Linux မှာ Build လုပ်ရင် လျှောလျှောရှူရှူ လုပ်သွားတယ်ဆိုတာ အတော်ရှားတယ် အနည်းဆုံးတော့ လက်ပူတိုက်ရတာပဲ :P အဲဒီတော့ ပြသနာအရှင်းဆုံးက Binary ပဲရှာထည့်ဆိုသလိုပဲ ဖြစ်နေတာများတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လေ FreeBSD လည်းသူ့အတွက် အသေအချာ Port လုပ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ပဲ မူရင်းဆိုက်က Source ကို Build လုပ်ရင်တော့ သူလည်း ပြသနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ပါပဲ။
ဟုတ်ပါပြီ Stability မှာ FreeBSD က Kernel ကတစ်နေရာ Application တွေက တစ်နေရာဆိုပြီး တစ်စစီစုထားတာ မဟုတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ တော်တော်ကောင်းတဲ့အဖြေပါ ဖတ်တဲ့လူတွေလည်း အကျိုးရှိပါတယ်။ ZFS ဆိုတော့ ZFS က OpenSolaris ကနေ Port လုပ်ထားတာကိုသတိရတယ်။ OpenSolaris ဟာလည်း Solaris ကိုအခြေခံတဲ့အတွက် Security နဲ့ Stability အင်မတန်ကောင်းတယ် နောက်ပြီးတော့ Commercial ဖြစ်တဲ့ Solaris မှာရတဲ့ Features တွေ အားလုံးနီးနီးပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လေ OpenSolaris ကတော့ နောက်ကျတာရယ် Solaris ကြောင့်ရယ် Community ကတော့ FreeBSD ထက် အများကြီးနည်းတာပေါ့။ အဲဒီတော့ OpenSolaris နဲ့ FreeBSD ဆိုရင် ကိုBox ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ မေးသာမေးရတယ် သူကအသစ်ကိုမထွက်တာ နည်းနည်းကြာပြီ
ကျနော်လဲ များသောအားဖြစ် build ပြီးသား package ကို install လုပ်တာများတယ် အချိန်ကုန် သက်သာတယ်၊ တူတာကတော့ အတူတူပါပဲ build လုပ်ယူရင်လဲ ဒါပဲရမှာပဲနော်
တချို့ဟာလေးတွေပဲ လိုအပ်လာတဲ့အခါမှသာ build လုပ်ရင်ကောင်းတယ်၊ ဥပမာ lang/php5 ကို install လုပ်တဲ့အခါ config မှာ build apache module ကိုပါ တခါတည်း select လုပ်ပြီး build လုပ်ရတာမျိူးလေးတွေပေါ့။ pkg_add -r php5 ဆိုရင်တော့ apache module က default အနေနဲ့ မပါလားဘူးလေ။ update လုပ်ရင် freebsd-update ကသွားပဲသွားလိုက်တာပဲ .. build ချင်ရင်တော့ cvsup နဲ့ subscribe လုပ်ပြီး buildworld buildkernel သွားလဲရတာပဲ .. နည်းလမ်းတွေတော့ ရှိတယ်လေ။
Solaris နဲ့ပတ်သတ်ရင်တော့ ကိုလူပျိုကြီးလောက် ကျနော် မသိပါဘူး၊ OpenSolaris တောင် တခါပဲ Install လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲတုန်းက Unix ကို ကောင်းကောင်းမသုံးတက်သေးတာလဲပါမယ်။
အေးဗျ အရင်လထဲက Steve Jobs ဆုံးသွားတာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဂျီတော့ကနေ လာပြောတုံးက "အေး.. သေပြီလား" လို့သတင်းတစ်ခုလိုပဲ သဘောထားမိပါတယ် သိပ်မကြာဘူး ရက်ပိုင်းပဲကွာတယ် Dennis Ritchie သေသွားတော့ အတော်ကို နှမျောသွားမိတယ်။ တကယ်တော့ လူတွေမသိကြတဲ့ Forgotten Legend ကြီးပဲ သူသေသွားလည်း သူ့ကိုယ်စားအဖြစ် Unix ကရှေ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ခရီးဆက်ဦးမှာပါပဲ။
ဟုတ်ပါ့ဗျား .. တကယ့်ကို Legend ကြီးပါပဲ .. ကိုလူပျိုကြီး blog မှာ ရေးထားတာ သိပ်ကောင်းတယ်။
နောက်လာမယ့် IT လူငယ်တွေ သိသင့် သိထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။ သူ့ကျေးဇူးက လူသားကမ္ဘာမှာ မနည်းလှပါဘူး။ C နဲ့ Unix ကတော့ ကိုလူပျိုကြီးပြောသလိုပဲ ဆက်လက်တည်ရှိပြီး အကျိုးပြုနေအုံးမှာပါပဲ။ ခရီးထပ်ဆက်နေဦးမှာပါပဲဗျား။
တော်သေးတယ်ဟ အားပေးတဲ့ရှိသေးတယ် ဟီးဟီး ကျွန်တော့်ဘလော့က ပရိတ်သတ်များ မှားနေသလားမသိ ကွန်ပျူတာအကြောင်းရေးလိုက်လို့ကတော့ လူအဝင်ကတစ်ခါတည်း ထိုးကျသွားတာပဲ :P ဟင်းချက်နည်းတင်လိုက်တာ တစ်ခဏအတွင်း လူတစ်ရာလောက်လာဖတ်သွားတယ် ကွန်ပျူတာနဲ့ပါတ်သက်တာရေး တစ်ရက်ကို ၅ ယောက်လာဖတ်ရင်ကံကောင်း ဟီးဟီး
I have always been curious about freeBsd but never really taken any steps beyond just installing it. Given that there doesn't seem to bealot of freeBsd users, there has to be some drawbacks. Can you elaborate on those?
Is freeBsd particularly dominant in any server markets or industries and why?
I don't think I understand when you two were talking about putting together kernel and apps and how it relates to stability. is it the micro/monolithic kernel debate or something else? Can just point me in the right direction thanks
I didn't know about the codecs stuff. That was so annoying with ubuntu . But why can freeBsd do it so smoothly? I thought it's the licensing issues with propriety codecs or something.
A good read overall if slightly disorganized. I think instead of ppl asking questions, maybe it can be like an article format . Thanks for your time!
အင်း Kernel and Apps ကိုတစ်နေရာတည်း ထားရုံနဲ့ Stable ဖြစ်သလားရယ်တော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး ဒါပေမယ့် Unix ရဲ့သဘာဝက Backward compatible ကိုဦးစားပေးပါတယ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Standard ကိုလိုက်နာရပါတယ် အဲဒါကြောင့် Version အသစ်ထွက်လို့ Upgrade လုပ်လိုက်ရင် အရင်သုံးနေတဲ့ Software အလုပ်မလုပ်မှာ မပူပန်ရသလောက်ပါပဲ။ Linux မှာအဲလိုမဟုတ်ဘူး သူကတော့ Standard ရယ်သတ်မှတ်ချက်မထားဘူး အဲဒါကြောင့်အသစ်ထွက်ရင် အရင်အဟောင်းနဲ့ compatible ဖြစ်မယ်အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ Linux ကို Stable ဖြစ်သလားသိချင်ရင် Upgrade လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုသိပါတယ် အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ Linux Server တစ်လုံး အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်မှမဟုတ်ရင် Upgrade လုပ်ဖို့အတော် စဉ်းစားရပါတယ် အများအားဖြင့် Upgrade လုပ်ရင် Dependency တွေကြောင့် ပြဿနာအများဆုံးတက်ပါတယ်။ Ubuntu လိုဟာ ပိုပြီးတော့မလုပ်ရဲပါသေးတယ်။ BSD တွေမှာတော့ အင်မတန်ဖြစ်ခဲပါတယ် နောက်ပြီးတော့ Linux Distro တွေလိုလည်း အားတိုင်းအသစ်ထွက်တဲ့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။
Linux တွေ Stable မဖြစ်ရခြင်းထဲမှာ Distro တွေအများကြီး ဖြစ်နေတာလည်း အကြောင်းတစ်ခုပါ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အပြိုင်လိုဖြစ်နေတယ် ဥပမာဆိုရင် Ubuntu က ၆ လတစ်ခါထွက်တယ် အဲဒီတော့ အသစ်ထွက်တိုင်း ဘာပါလဲဆိုရင် အသစ်ထွက်တဲ့ Package Version တွေပါပါတယ် အဲဒီတော့ သိန်းချီနေတဲ့ Package အသစ်တွေကို ၆ လအတွင်း အကုန်လုံးပြီးအောင် Build လုပ်ကြရပါတယ် အဲဒီတော့သူတို့က ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုလိုပဲ တကယ်တမ်း Testing လုပ်ချိန်သိပ်မရှိကြပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် Linux သုံးကြတယ် ဒါပေမယ့် Stable ကိုပိုလိုချင်လို့ RedHat လို Paid Distribution တွေသုံးကြတာပါ သူတို့မှာတော့ ငွေအင်အားလူအင်အားပိုကောင်းလို့ Testing လုပ်ချိန်လည်းပိုရကြပါတယ် အဲဒါကြောင့် Stable ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းလက်ခံကြပါတယ်။ FreeBSD မှာတော့ အလကားရတာချင်းတူပေမယ့် ဆော့ဝဲတွေကို Ports လုပ်တဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူ လုပ်လို့မရပါဘူး။ FreeBSD မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ပြင်သင့်တာပြင် ထည့်သင့်တာထည့်နဲ့ အသေအချာ လုပ်ယူရပါတယ် အဲဒီတော့သူတို့ဟာ FreeBSD မှာအလုပ်လုပ်မလုပ် အသေအချာ Testing မလုပ်မနေရ လုပ်ယူကြရပါတယ် အဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ stability ဟာပိုကောင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Kernel and Apps Development ကိုတစ်နေရာတည်း ထားလို့ဘာတွေ ဖြစ်သလဲဆိုတာကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ FreeBSD မှာပြောလေ့ရှိတာက Kernel and Application are under same source tree. လို့ပြောလေ့ရှိပါတယ် ဆိုလိုတာက Kernel Development နဲ့ Application Development ဟာသီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး သူတို့မှာ Coordination ရှိပါတယ်။ Linux ကတော့ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး Kernel Development ကသီးသန့်တစ်နေရာမှာပါ Torvalds နဲ့အဖွဲ့က သူ့ဟာသူလုပ်နေပြီး Application Development တွေကလည်း သူ့ဟာသူသီးသန့်စီ တစ်ခုစီဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီ့လူတွေကြားမှာ Coordination မရှိကြပါဘူး။ အဲဒီ့မှာမှ Distro လုပ်တဲ့လူတွေက ဟိုဘက်ဒီဘက်ကနေ အကုန်ဆွဲယူပြီးတော့ ပေါင်းပေးရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Distro လုပ်တဲ့လူအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Linux တွေမှာ stability မတူညီကြပါဘူး။
ကျွန်တော်က Linux သမားလည်းမဟုတ် FreeBSD သမားလည်းမဟုတ်ပါ Open Source သမားလည်းမဟုတ်ပါ ကိုယ်လုပ်မယ့်အလုပ်အတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိမယ့်အရာဆိုရင် ဝယ်သုံးဖို့လိုလည်း ဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားပါတယ် အဲဒါကြောင့် ဘယ်ဟာရယ်အစွဲမရှိပါဘူး အဲဒါကြောင့် ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာရောဆိုးတာရော အကုန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ FreeBSD က Linux နဲ့ယှဉ်ရင် ဘာမကောင်းဘူးလဲ ပြောပါဆိုရင် တကယ်တော့ မကောင်းတာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ် နောက်ပြီးတော့ FreeBSD သုံးတဲ့လူက ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် Linux နဲ့ယှဉ်ရင်နည်းပါတယ် ဒါပေမယ့် Unix မသုံးကြတော့ဘူးတော့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး Commercial Unix တွေက​တော့ အရေအတွက်နည်းပေမယ့် သုံးနေကြရတုံးပဲ။ နောက်တစ်ခေါက်မှာ အဲဒါတွေထပ်ပြောတာပေါ့ အခုတော့ အပြင်သွားရတော့မယ်။
Internet မှာ ရှာကြည့်ပါ
Kernel တွေအကြောင်း ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး
ဟုတ်တယ် FreeBSD မှာ အေးဆေးပါ
ကိုလူပျိုကြီးရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ ကွန်ပျူတာဝါသနာပါတဲ့သူအရေအတွက်နည်းလို့ထင်တယ်
FreeBSD ကိုလေ့လာချင်ရင် www.freebsd.org ကိုသွားပါ။ wikipedia မှလည်း FreeBSD အကြောင်းနဲ့သမိုင်းကို ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ခုလက်ရှိ STABLE က 8.2-RELEASE ပါ။ နောက်ဆုံး unstable release က 9.0-RC1 ပါ။ Lastest features တွေ စမ်းသုံးကြည့်ချင်ရင် 9.0-RC1 ကို install လုပ်ပြီး သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
FreeBSD က testing ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးမှ STABLE branch ထဲရောက်တာပါ။ STABLE မှာလည်း security update တွေ ရနေပါတယ်။ security update တွေကိုတော့ security advisories မှာ ကြေငြာပေးပါတယ်။
သိချင်တာအားလုံးကို freebsd.org or forums.freebsd.org မှာ ရှာဖွေမေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။